सन्नी लियोनीको एप, के के छ यसमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
सन्नी लियोनीको एप, के के छ यसमा ?
करियरको शुरुवात पोर्न मुभीबाट गरेर लामो समय त्यसै क्षेत्रमा सक्रिय रहेर केही वर्षअघि मात्र बलिउड प्रवेश गरेकी सन्नी त्यसयता लगातार व्यस्त छिन् । सन्नी लियोनी अभिनयका साथै प्रोडक्सन र ब्रान्डमा समेत काम गर्छिन् ।
सन्नीले केही समयअघि आफ्नो सौन्दर्यसम्बन्धी ब्रान्ड ‘स्टारस्ट्रक’ बजारमा ल्याएकी थिइन्, जसको पहिलो चरणको उत्पादन बजारमा आइसकेको छ । यसबाहेक सन्नी एप निर्माणको अर्को तयारीमा जुटेकी छिन् ।
याे पनि पढ्नुस भादगाउँले टोपी लगाएर नेपाल पुगिन् सन्नी लियोनी
अत्याधुनिक उक्त एपलाई सन्नी चाँडै बजारमा पठाउने तयारीमा छिन् । यो नयाँ एपमा प्रयोगकर्ताहरूले कसरी आकर्षक देखिन सकिन्छ भनेर आफूलाई एपमा दाँज्न सक्नेछन् । सन्नीले भनेकी छिन्– उनले यो एपका लागि लामो तयारी गरेकी थिइन् ।
श्रृंगार प्रसाधन खरिद गर्ने क्रममा हामी सधैं भ्रममा रहन्छौं, सन्नीले भन्छिन्— यो एपमा हाम्रो स्किनमा कुन कलर राम्रो देखिन्छ, कुन लिपिस्टिक खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्ता धेरै कुरा हेर्न सकिनेछ ।
याे पनि पढ्नुस हट नायिका सनी लियाेनी बिहीबार काठमाडौं आउँदै
युवतीहरूका लागि यो एप निकै उपयोगी हुने अनुमान गरिएको छ । हाल सन्नी एक तमिल चलचित्रमा काम गरिरहेकी छिन्, जसमा उनले राजकुमारीको भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ ।
ट्याग्स: सन्नी लियोनी